ရေဘေး တွေကူညီရင်း ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ ပရဟိတမင်းသား ဝေဠုကျော် – itpoekar,Co.th
ရေဘေး တွေကူညီရင်း ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ ပရဟိတမင်းသား ဝေဠုကျော်
ရေဘေး လေဘေး မီးဘေး ဘယ်လိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ကြုံကြုံ အပြေးအလွှားသွားရောက် ကူညီတတ်တဲ့ အကယ်ဒမီဆုရှင် မင်းသား ဝေဠုကျော်ကို အများက ပရဟိတမင်းသားလေးလို့ တောင်ခေါ်ကြတာပါ….မိန်းမမရှိသေးဘဲ တစ်ကိုယ်တည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ကိုယ်ဝါသနာပါရာ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေကို ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ လုပ်ဆောင်တတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်… ဒီလို ကြောင့်လည်း အစားအသောက်မမှန်ဘဲ ခုဆို ဆေးကုသမှု ခံယူရတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်…
ဝေဠုကျော်ဟာ အရင်က အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ခဲ့ဖူးပြီး အခုလည်း အစာအိမ်နာဖြစ်နေတာကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်…
ဒီအကြောင်းကို ဝေဠုကျော် ဘေးနားမှာ အမြဲရှိတဲ့ ကိုဘိုစိန်က ခုလိုပြောပါတယ်…
“အစားအသောက်မမှန်တာကနေ ဖြစ်တာ…အစာအိမ်နာနေတာကြာလို့ ဒီနေ့မှာ မေ့ဆေးပေးပြီး အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်ဖို့ ဆေးရုံကြိုတက်ထားတာပါ… အရင်ကလည်း အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ဖူးတယ်… အစားအသောက်အမှန်တော့ ပြန်ဖြစ်တာပါ”လို့ ဆိုပါတယ်…
မကြာသေးမီက မလတ်တောင် မြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်မှာလည်း ဝေဠုကျော် တစ်ယောက် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသေးတယ်…ခုလို ဆေးရုံတက်နေရတဲ့အတွက် ဝေဠုကျော်ဟာ ကိုယ်တိုင်ပရဟိတဝင်လုပ်ခြင်းကနေ ခဏနားထားပါတယ်….
ရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ဝေဠုကျော်ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ “ပင်လယ်ထက်က နေဝန်းနီ” ဇာတ်ကားနဲ့ အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆုကို ရရှိထားတဲ့ အကယ်ဒမီဆုရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်….
ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကစပြီး တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော် ဖောင်ဒေးရှင်း ဟာ ခုဆိုရင် ၁၀ စုနှစ်တစ်ခုတိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်…ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ပရဟိတမင်းသား ဝေဠုကျော် အမြန်နေပြန်ကောင်းလာဖို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်…Source : Duwun and ကိုဘိုစိန်
Previous ဘုရားရှင်အား တစ်ကြိမ် ဦးချရခြင်းအကျိုး ဖတ်ပြီးရှယ်ပေးခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ
Next ထူးထူးခြားခြား အရပ် (၈) ပေ ရှည်တဲ့ တချိန်က နိုင်ငံကျော် ဇီးကွက်စိန် အကြောင်း